Push Marketing Ukuvela nge-Passbook | Martech Zone
NgoLwesibili, Novemba 27, 2012 NgoLwesibili, Novemba 27, 2012 Douglas Karr
Ngisanda kuqala ukusebenzisa I-Passbook ku-iPhone yami lapho ngivakashele i-Starbucks. Yize ngiziqhenya nge I-Starbucks Gold Card, Ngijabule kakhulu ukunciphisa ubukhulu besikhwama sami semali ngekhadi elilodwa. Ngivele nginike i-barista ifoni yami futhi bakwazi ukuskena ikhadi lami lemiklomelo khona lapho! Ngisebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-Starbuck, ngingalayisha kabusha ikhadi lami ngqo kusuka efonini yami.
IWebhu Elandelayo isanda kwenza i- thumela konke ngePasbook nokuthi amabhizinisi kufanele agxume kanjani ebhodini, kepha ukuphawula kokuthunyelwe kwangidonsela amehlo. Ngoba i-Apple ihlanganise iPasbook nensizakalo yayo yezaziso, amaphasi aba yithuba eliyinhloko lamabhizinisi lokucindezela izibuyekezo kalula kubasebenzisi bawo.
Nakhu ukuphawula okuvela kuJim Passell kule ndatshana, echaza ukuthi kuyimbuyiselo enkulu ekutshalweni kwemali:
Wonke amakhasimende ami azuze okunye kokudlula kwami, uthola isibuyekezo masonto onke sokunikezwa okusha. Ukuphasa kwabo kubaqabule noma kwabazisa. Noma ngibathumela isimemezelo sokuthengisa okuzayo, noma inothi yomuntu siqu evela kumphathi wesitolo, noma yini. Ngakho-ke ukudlula kwami ​​kuhlala phezulu esikhwameni sabo futhi kuba yisiteshi sami ukuxhumana nabo. Baba amakhasimende unomphela, noma ngabe kungenzeka ukuthi baqale nje isigqebhezana-clipper.
Ake sibhekane nakho. Ibhokisi lokungenayo likhungethwe yizinkinga zokuhlunga ogaxekile futhi abathengi sebephelelwe ngamandla ekuthengisweni kwe-imeyili. Ngenkathi kusekhona ukubuyisa okumangalisayo kotshalomali ngenxa yezindleko eziphansi ze-imeyili, ukunakwa kuyinkinga ekhulayo. Ukuthumela imiyalezo kungobunye ubuchwepheshe be-push obumnandi, kepha abathengi bavame ukungabaza ukubhalisa nokukhulula inombolo yabo yocingo ukuze bayifinyelele. Izaziso ze-Push ngokusebenzisa izinhlelo zokusebenza zeselula nezinhlelo zokusebenza ezifana ne-Passbook zingangcono kakhulu ukumaketha kwe-push ithuba.
Sixoxile futhi I-Geofencing, iqhinga lokumaketha elisuselwa ebufakazini elifaka i-SMS (imiyalezo) noma ukumaketha kwe-Bluetooth. Lapho ifoni yakho yeselula ingena ebangeni, ungacindezela izaziso Yebo, iPassbook inikeza i-geolocation njengecebo, futhi. Ungasunduza ngokoqobo isibuyekezo sokudlula lapho othile engena endaweni ethile eseduze. Okuhle kunakho konke, awudingi noma yibuphi ubuchwepheshe obungeziwe bokuyisekela ngoba yakhiwe ngqo ezinsizakalweni ze-geolocation zeselula.
Njengoba iPassbook isivele idinga ukubhaliswa kwethikithi, uhlelo lokugibela, isigqebhezana noma uhlelo lokuthembeka, laba futhi bangabasebenzisi bakho abazibophezele kakhulu. Baye baqhubeka ngenkuthalo ubudlelwane nenkampani yakho. Futhi ukwesekwa akugcini kumadivayisi we-iOS, i-Attido Mobile ithuthukile I-PassWallet, uhlelo lokusebenza lwe-Android olusebenzela iphakethe elijwayelekile lokudlula.
Ungathuthukisa iPass yakho eceleni kohlelo lwakho lwe-iOS usebenzisa umtapo wolwazi wendabuko, noma ungasebenzisa i-SDK efana Iphasiphothi. Izinkampani zokuthuthukisa nokuphatha ezivela eceleni zifaka I-WalletKit, I-Passdock, PassTools, Amapasi, I-PassRocket futhi I-PassKit.
Tags: geolocationubuchwepheshe beselulakudluleincwadi yokudlula i-apuladlulaipasiamakhasi wokungenaukudlulaiphasiphothii-passwalletukumaketha kwe-pushubuchwepheshe bokucindezelaisikhwama semali
Faka uhlelo lwakho lwaphansi ku-Google Amamephu
Nov 27, 2012 ngo-5: 43 PM
Ngingumsunguli / i-CEO yamaPassTools, futhi singomunye wabaholi besikhala esivelayo sokwakha amaphasi. Ngingakujabulela ukuthi nawe usifake ohlwini lwakho.
Nov 27, 2012 ngo-10: 56 PM
Kwenziwe! Ngiyabonga Joe!
Nov 28, 2012 ngo-12: 12 PM
Ucezu olubhalwe kahle uDouglas!
Ngihola iqembu lomkhiqizo eVibes (http://www.vibes.com), inkampani yezobuchwepheshe bokumaketha yeselula esebenza nemikhiqizo nabathengisi ukwakha ubudlelwano obusheshayo obuhlala njalo namakhasimende abo. Senza ukubheja okuncane ku-Passbook, esivele sinamakhono okuphatha we-Pass lifecycle integrated (create - deliver - manage - analyze - re-target) kungxenyekazi yethu. Sethule uhlelo lwe-Passbook Beta futhi sinemikhiqizo emikhulu, kazwelonke ebheke ukusebenzisa amandla wePasbook njengengxenye yecebo labo lokumaketha elibanzi.
Bengifuna ukuzwakalisa injabulo yakho ngePasbook. Ngikholwa ukuthi izoguqula indlela ama-brand ahlangana ngayo namakhasimende abo aqotho futhi kwesinye isikhathi athembekile. Futhi isivele icindezele iGoogle ukuthi icabange kabusha isu labo le-Google Wallet.
Nov 28, 2012 ngo-4: 51 PM
I-athikili enhle, futhi ngiyabonga ngokwabelana ngezinketho zokuthuthuka kwamaphasi. Uma ubheka inani kokubili kumthengi nakumakethi, kuyamangaza ukuthi izinkampani eziningi kakhulu azikaze zigibele ebhodini kuze kube manje ngokuzifaka kwiPasbook. Uqinisile, kulula kakhulu kumthengi (ngisebenzise uhlelo lwakwaStarbucks uqobo lwami selokhu ngathenga i-iPhone5), futhi kubonakala sengathi iyindlela ephumelela kakhulu yokumaketha izethameli zanamuhla ezikhathele. Ngibheke phambili ekuboneni amabhizinisi amaningi ejoyina iPasbook, nokulahla ipulasitiki esikhwameni sami semali.
Jan 17, 2013 ku-6: 14 AM
I-athikili enhle uDouglas futhi ngiyabonga ngokushiwo.
Amandla okusunduza mhlawumbe yisici esaziswa kakhulu kuPasbook. Amakhasimende ethu nozakwethu bahlala behlabeka umxhwele lapho beqala ukuzwa umlayezo wesikrini sokukhiya kanye 'nokubuyekezwa kokujikeleza'. Kuyabasiza futhi ukuhlanganisa kangcono ama-Passbook Passes ebhizinisini labo, futhi bahlanganyele namakhasimende abo. okungukuthi abagcini nje ngokufaka esikhundleni sedijithali isigqebhezana esimile noma ikhadi lokwethembeka.
Noma ngubani angazizwela manje 'nge-push update'. Vele ulande ukudlula kwe-'AbraKebabra 'ekhasini lethu lasekhaya bese upheqa iPass ukuze uxhume ne-URL Yokuvuselela iPhasi. Le vidiyo esheshayo ikhombisa ukuthi ungayenza kanjani: http://youtu.be/D7i7RsP3MvE
Uma ungakaze uhlangabezane ne-Passbook Push kufanelekile ukuthi uyihambise; kanti ngenkathi isampula le-AbraKebabra Pass likhombisa ukuvuselelwa kwebhalansi, amathuba awanamkhawulo (njengoba noma iyiphi inkambu ingabuyekezwa futhi 'icindezelwe')